YEYINTNGE(CANADA): Sunday, April 04
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 4/04/20100အကြံပြုခြင်း
ကဗျာဆရာ ကိုစောဝေ ကို ထောင်ထဲပို့သူက ကဗျာရေးသူ စာပေစိစစ်ရေးညွှန်မှူးးကို အမှုပွေစေပြန်
ဗိုလ်ကျော်ဆန်းနှင့် မြတ်ခိုင်တို့လင်မယား ပုံ google searchမှ
၄င်း အယ်ဒီတာချုပ် မြတ်ခိုင် ထုတ်လုပ်နေသော လျှပ်တစ်ပြက်ဂျာနယ် ၂၀၁၀၊ဧပြီလ(၁)ရက် နေ့ထုတ်တွင် ပါရှိသော ကဗျာဆရာ မောင်ရဲ၏ “ထိုတစ်ရက်” အမည်ရ ကဗျာကို ဖတ်အပြီး၊ ကဗျာဆရာများနှင့် နီးစပ်သော အသိုင်းအ၀ိုင်းများက ဖွင့်ဟပြောဆို လာကြသည်။
“ထိုတစ်ရက်” အမည်ရ ကဗျာမှာ (…..ကဗျာစာထည့်) ဟူ၍ ဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံစာပေနှင့် စာနယ်ဇင်း ဥက္ကဌ ဦးဆောင်းအား ရည်ရွယ်၍ ရေးသားထားကြောင်း သိသာသလို၊ အာဏာထိုင်ခုံမက်သော သူတွေကိုလည်း သရော်ထားသည့် ကဗျာဖြစ်၍ ဖတ်သူတိုင်း ပြုံးကြရသည်။
စာပေအယ်ဒီတာကျင့်ဝတ်ကို မလိုက်နာသလို၊ စာနယ်ဇင်း တစ်လောကလုံး၏ မျက်နှာကို အိုးမဲသုတ်နေသော၊ နအဖ အစိုးရ၏ အောက်စွဲလုပ်နေသော ထို အယ်ဒီတာချုပ် မြတ်ခိုင် အား၊ (စာပေ ကင်ပေတိုင်ဗိုလ်မှုး တင့်ဆွေ တဖြစ်လဲ ကဗျာဆရာ မောင်ရဲ) က မည်သို့ပြန်လည် စီရင်လေမည်လဲ ဆိုသည်ကို စောင့်ကြည့် ကြရပေတော့မည်။
ပေးပို့လာသူ Burma Paparazi
ကဗျာဆရာ ကိုစောဝေဟာ လက်ကိုင်တုတ် မြတ်ခိုင် လက်ချက်ဖြင့် ၂နှစ်အကျဉ်းကျခံနေရပြီး... လွတ်ရက်စေ့နေပေမယ့် ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာခြင်း မရှိသေးပါဘူး....
Posted by ဒီမိုဝေယံ at Monday, April 05, 2010
ပါတီမှတ်ပုံမတင်ရန်၊ ရွေးကောက်ပွဲမ၀င်ရန် ဆုံးဖြတ်ပြီးပြီ။ ပြီးတော့ ဘာလုပ်မလဲ။ မလုပ်လို့တော့ မရတော့ဘူး။ နှစ်ခုဘဲ မြင်တယ်။ ပထမ က စင်ပြိုင်အစိုးရ၊ ဒါက Confrontation အရှင်းဆုံး။ နောက်တခုက Non-cooperation ထိပ်တိုက် ရင်ဆိုင်မှု မလုပ်ဘူး။ ကောင်းပြီ၊ ဘယ်နည်းဖြစ်ဖြစ် လူထုထောက်ခံတယ်။ လိုတာက တပ်မတော်။ ကဲ ဒီနေ့ ဘယ်တပ်မတော်သား၊ ဘယ်တပ်ရင်း၊ ဘယ်တပ်မက ပြည်သူဘက်ကို ပါမလဲ၊ စောင့်ရှောက် ကာကွယ်မလဲ၊ ဒါဘဲ လိုတယ်။ အကြံပြုလိုတာက Non-cooperation, PHASE2PLAN, Process က -
Phase 1 ၏ ရည်မှန်းချက်သည် သုံးပွင့်ဆိုင် ဆွေးနွေးရေး ဖြစ်ခဲ့သည်။ မအောင်မြင်ခဲ့။ တပွင့်ဖြစ်သော နအဖသည် မည်သည့်အခါမျှ ဆွေးနွေးပွဲစားပွဲသို့လာရန် စိတ်ကူးမျှပင် မရှိ။ ၂၀၀၈ တွင် ၄င်း၏ အခြေခံဥပဒေကို အတည်ပြုလိုက်နိုင်ပြီး ၂၀၁၀ တွင် ရွေးကောက်ပွဲပြုလုပ်ကာ တရားဝင်အစိုးရဖြစ်လာရန် အဆင်သင့် ဖြစ်နေ သည်။ ၄င်း ၂၀၀၈ တွင် တော်လှန်ရေး အပိုင်း (၁) Phase one အလိုအလျောက် နိဂုံးချုပ်သည်။
Phase two ၏ ရည်မှန်းချက်သည် ဒုတိယပင်လုံ ဖြစ်ရမည်။ နအဖ က ဘာကြီးဖြစ်နေနေ။ ၄င်းအား ဖုတ်လေသည့် ငပိ ရှိသည်ဟုပင် မအောက်မေ့ဘဲ ဒုတိယပင်လုံသို့ ချီတက်ရန် ဖြစ်သည်။ ပြည်သူလူထု အသီးသီးတို့သည် မိမိကိုမိမိအားကိုး၊ မိမိကိုမိမိ အုပ်ချုပ်ရန် ဖြစ်သည်။ Phase 1 သည် ပြည်ပကို အခြေပြု၍ Phase2သည် ပြည်တွင်းကိုသာ အခြေပြုရမည်။
နံပါတ် (၁) လုပ်ဆောင်ရန်မှာ ပြည်သူများ နအဖနှင့် ကင်းရှင်းရေး -
ပါတီဆိုလျှင် နအဖက ရန်သူ သတ်မှတ်သည်။ သို့ဖြစ်၍ ပြည်သူများအား Associations များ ဖွဲ့ပေးရမည်။ Association များသည် စာပေ၊ သမိုင်း၊ ယဉ်ကျေးမှု ထိမ်းသိမ်းမြှင့်တင်ရေး နှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကိုသာ လုပ်ဆောင်ရမည်။ သို့ဖြစ်လျှင် နအဖနှင့် ထိပ်တိုက်တွေ့ရန် ကင်းလွတ်မည်။
နံပါတ် (၂) လုပ်ဆောင်ရန်မှာ ပြည်သူများ မိမိကိုမိမိ အားကိုးရေး -
ဒေသအလိုက် Development များလုပ်ဆောင်နိုင်ရန် ပြည်ပ NGO များနှင့် Association များ တွဲဘက်ပေးရမည်။ နအဖကို အားကိုးရန်မလိုဘဲ လူထုက မိမိကိုမိမိ အားကိုးလာရမည်။
နံပါတ် (၃) လုပ်ဆောင်ရန်မှာ ပြည်သူများ သတ္တိရှိလာရေး -
လက်နက်ကိုင်တပ်များ ထားရှိရမည်။ ယင်းသည် နအဖကို အနိုင်တိုက်ခိုက်ရန် ရည်ရွယ်သည် မဟုတ်၊ ပြည်တွင်းစစ်ကို ဦးတည်ခြင်း မဟုတ်၊ အမှန်တရားကို ထုတ်ဖော်၊ ပြောဆို၊ လုပ်ဆောင်ရဲသော ပြည်သူလူထုကို စောင့်ရှောက် ကာကွယ်ရန် ဖြစ်သည်။ အာဏာရှင်၏ တပ်မတော်ကို အစားထိုးရန် ဒီမိုကရေစီတပ်မတော်ကို ယခုကတည်းက ထူထောင်ခြင်း ဖြစ်ရမည်။ ဒေသတပ်ဖွဲ့များကို ပြည်နယ်တပ်ဖွဲ့၊ ပြည်နယ်တပ်များကို ပြည်ထောင်စု တပ်မတော် အဖြစ် စုစည်းရမည်။
နံပါတ် (၄) လုပ်ဆောင်ရန်မှာ ပြည်သူများ မိမိကိုမိမိ အုပ်ချုပ်ရေး -
ပြည်ထောင်စုကောင်စီတွင် ပြည်နယ်ကောင်စီများစုစည်း၍ ပြည်နယ်ကောင်စီတွင် ဒေသကောင်စီများ စုစည်းရ မည်။ မည်သည့်ဒေသန္တရ၊ ဒေသမဆိုအား ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ရေး အာဏာ ပေးအပ်ရမည်။ လူထုက ယင်းကောင်စီ သို့ တာဝန်ပေးအပ်သော ကိုယ်စားလှယ်များကို သက်ဆိုင်ရာတပ်ဖွဲ့များက အပြည့်အ၀ ကာကွယ် စောင့်ရှောက်ရမည်။ နအဖ၏ အမိန့်၊ အာဏာ၊ ဥပဒေကို တခုမျှလိုက်နာရန် မလိုဘဲ မိမိတို့ကောင်စီ၏ ပေးအပ်သော အခွင့်အရေး နှင့် တာဝန်ဝတ္တရားတို့ကိုသာ လေးစားလိုက်နာခြင်း ရှိလာရမည်။
နံပါတ် (၅) လုပ်ဆောင်ရန်မှာ ပြည်သူများကိုယ်တိုင် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပြဌာန်းရေး -
ဤကာလတလျှောက် ရှစ်ပြည်နယ် စုစည်းရေးကို လုပ်ဆောင်ရမည်။ ပြည်သူများကိုယ်တိုင် သဘောတူညီ ရေးဆွဲသော ပြည်ထောင်စုဥပဒေပေါ်ပေါက်လာခဲ့သော် ဒုတိပင်လုံ၌ ပြန်လည် ဆုံတွေ့၍ အတည်ပြု ပြဌာန်း နိုင်ပြီ ဖြစ်သည်။ ရှစ်ပြည်နယ်ဖြင့် နေသားကျလာသော သက်တန်း၌ ပြည်နယ်သစ်များ တိုးမြှင့်လက်ခံရေးကို ဖွဲ့စည်းပုံက အာမခံရမည်။
JAPAN နိ.ုင်ငံ NAGOYA မြို့ရှိမြန်မာ့ဒီမိုကရေစီအရေးလှုပ်ရှားမှု
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများလွတ်မြောက်ရေးအတွက် JAPAN နိုင်ငံ NAGOYA မြို့ 
ရှိမြန်မာ့ဒီမိုကရေစီအရေးလှုပ်ရှားသူများမှလက်မှတ်ရေးထိုးတောင်းဆိုမှု အားယနေ့ (၄.၄.၂၀၁၀)တွင်အောင်မြင်စွာပြုလုပ်ခဲ့ကြပါသည်..။
http://ifile.it/us68h1e4 April 2010 Yeyintnge Diary
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 4/04/2010 1 အကြံပြုခြင်း
ပြည်သူ့ဂုဏ်ရည် အစီအစဉ်သို့ ဂုဏ်ပြုရန်အမည်စာရင်း လက်ခံရရှိသမျှ
ပြည်သူ့ဂုဏ်ရည် အစီအစဉ်သို့ ဂုဏ်ပြုရန်အမည်စာရင်း လက်ခံရရှိသမျှ တင်ပြချက်
စာအမှတ် ၃/ ၂၀၁၀ - နေ့စွဲ - ဧပြီ ၃၊ ၂၀၁၀
၁။ မတ်လ ၂၄ ရက်နေ့က စတင်ပြီး Citizen of Burma Award - ပြည်သူ့ဂုဏ်ရည် အစီအစဉ်ကို ကြေငြာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ မြန်မာပြည်တွင်းရှိ စေတနာ့ဝန်ထမ်းလူမှုလုပ်ငန်း စွမ်းဆောင်သူများအနက် မိမိတို့ ဆန္ဒပြုလိုသူကို အွန်လိုင်းနှင့် အီးမေးများမှ တဆင့် တင်သွင်းရန် ဖိတ်ခေါ်ခဲ့သည်။ လက်ရှိပါဝင်ဆောင်ရွက်နေကြသော ပြည်သူ့ဂုဏ်ရည်အစီအစဉ် ဖြစ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ဝင်များကလည်း မိမိတို့နေထိုင်ရာ မြို့ရွာဒေသအလိုက် ဆန္ဒသဘောထားများ လိုက်လံမေးမြန်းကောက်ခံခြင်းတို့ကိုလည်း ဆောင်ရွက်လျက် ရှိကြသည်။ များမကြာမီတွင် စာရင်းကောက်ခံရရှိသမျှကို မြို့နယ်များအလိုက်ဖြစ်မြောက်ရေးကိုယ်စားလှယ်များထံ စုပေါင်းတင်ပြပြီး ၎င်းတို့ထံမှ ဆန်ကာတင် ၅ ဦး စာရင်း ရယူမည့် အချိန်လည်း ရောက်ရှိလာတော့မည် ဖြစ်သည်။
၂။ ယခုလက်ရှိ မတ်လကုန်အထိ လက်ခံရရှိသော အမည်စာရင်းတင်သွင်းမှုများမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းအမည်စာရင်းရှင်တို့၏ ထူးခြားမှုအကျဉ်းကိုလည်း ရရှိသော အချက်အလက်များပေါ်မူတည်၍ အောက်ပါအတိုင်း တွဲဖက် တင်ပြလိုက်ပါသည်။
၁။ သီတဂူဆရာတော် ဦးဉာဏိသရ - နာဂစ်မုန်တိုင်းတိုက်ခတ်ပြီးနောက် ဒုက္ခသည်ကူညီကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းများတွင် နိုင်ငံတကာ အန်ဂျီအိုများပြီးလျင် တဦးချင်း အနေဖြင့် ငွေကြေး၊ အရင်းအနှီးအများဆုံးကို ပြည်သူလူထုထံက စနစ်တကျ အလှူခံကာ ဒုက္ခသည်များအား စနစ်ကျစွာဖြင့် ထောက်ပံ့ ပေးနိုင်ခဲ့သည့် ဗုဒ္ဓဘာသာ ဆရာတော် တပါးဖြစ်သည်။ ၁၉၈၀ ခုနှစ်များကတည်းက ရန်ကုန်၊ မန္တလေး၊ စစ်ကိုင်းအခြေပြုပြီး သောက်သုံးရေ အလှူ၊ ဆေးကုသမှု ဒါနအလှူ နှင့် လူမှုလုပ်ငန်း စေတနာ့ဝန်ထမ်းအလုပ်များကို အားပေး ထောက်ပံ့သူ၊ လှုံဆော်စည်းရုံးသူ၊ တည်ထောင်ဆောင်ရွက်သူတဦးအဖြစ် ထင်ရှားသည်။
၂။ ဦးနာယက၊ မန္တလေး - ဖောင်တော်ဦးဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း - ဘုန်းတော်ကြီးသင်ပညာရေးကျောင်းကို ၁၀ စုနှစ် တခုကျော် ဦးဆောင် အကောင်အထည်ဖော်သူဖြစ်သည်။ အလှူရှင်များ၊ အဖွဲ့အစည်းများ၊ စေတနာရှင်လုပ်အားပေးများဖြင့် ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းအခြေပြု နေ့ကျောင်းနှင့် အဆောင်ကျောင်းများတွင် ပညာသင်ဦးရေ ၅ ထောင်ကျော်ကို ပညာသင်ပေးနေသည်။ ပြည်နယ် အစွန်အဖျား အနှံ့က ကလေးသူငယ်များကိုလည်း စောင့်ရှောက်ပျိုးထောင်မှု ပေးလျက်ရှိသည်။ ဘုန်းတော်ကြီးသင်ကျောင်းများမှတဆင့် အဆင့်မြင့်ပညာရေးဆက်နိုင်အောင်လည်း အားပေးဆောင်ရွက်နေသူဖြစ်သည်။
၃။ ဦးဇေယျာပဏ္ဏိတ၊ မိုးညှင်းသိဂီကျောင်းတိုက် ဆရာတော် ( ပိုင်းလော့ဆရာတော်)၊ တောင်ဒဂုံမြို့သစ် ၊ ရန်ကုန် - နာဂစ်မုန်တိုင်း အပြီး ကွမ်းခြံကုန်း၊ ဒေးဒရဲအပိုင် ကျေးရွာများအတွက် ကယ်ဆယ်ရေး၊ ပြန်လည်ထူထောင်ရေး၊ စားရေရိက္ခာ ထောက်ပံ့ရေး၊ ဆေးဝါးကုသရေးလုပ်ငန်းများ ဦးဆောင်ကူညီမှုများ ပေးအပ်ခဲ့သည်။ ရွာသားများနှင့် ကလေးသူငယ်များကို စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးဖြေသိမ့်မှုများ ဆောင်ရွက်ပေးရုံသာမက ရွာသားများအား ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအတွက် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းများကို ကိုယ်ထူကိုယ်ထ ကြံဆ ဆောင်ရွက်လာနိုင်အောင် စည်းရုံးဦးဆောင်နိုင်ခဲ့သည်။
၄။ ဦးသုမင်္ဂလ (ဒယ်အိုးဆရာတော်) ၊ မှော်ဘီမြို့၊ မင်္ဂလာကျောင်းတိုက် - ၂၀၀၇ နောက်ပိုင်း တရားပွဲများတွင် ယနေ့မြန်မာလူမှုအဖွဲ့အစည်းကို ဝေဖန်ထောက်ပြမှုများဖြင့် ထင်ရှားသူ ဗုဒ္ဓဘာသာတရားပြ ဆရာတော်ဖြစ်သည်။ သုမင်္ဂလာအကျိုးတော်ဆောင်လုပ်ငန်းကို ထူထောင်ပြီး နာဂစ်ကူညီမှုလုပ်ငန်းများ၊ ပညာဒါနလုပ်ငန်းများ၊ ကျန်းမာရေးနှင့် အထွေထွေလူမှုရေးလုပ်ငန်းများအတွက် ထောက်ပံ့လှူဒါန်းမှုများ ပြုလုပ်သူ ဖြစ်သည်။
၅။ ကျော်သူ၊ ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်၊ နာရေးကူညီမှုအသင်း - ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်အလုပ်ကိုပါ အထိခိုက်ခံပြီး ရန်ကုန် - နာရေးကူညီမှုအသင်းကြီးကို ဦးဆောင် ဆောင်ရွက်သူ၊ ထိုနာရေးကူညီမှုအသင်းနှင့်အတူ စာကြည့်တိုက်၊ ဆေးခန်း စသည့် ကုသိုလ်ဖြစ် လုပ်ငန်းများကိုပါ ဆက်လက် တာဝန်ယူဆောင်ရွက်နေသူ၊ နိုင်ငံ၏ ခေတ်နောက်ပြန်ဆွဲသည့် အယူအဆ အလေ့အကျင့်များကို နာရေးကူညီမှုလုပ်ငန်း ၀တ္တရားများဆောင်ရွက်ရင်း ထုတ်ဖော်ပြောဆိုပြီး ပြောင်းလဲမှုသို့ ဆွဲခေါ်သူ
၆။ မြင့်မြင့်ခင်ဖေ (ရွှေဇီးကွက်)၊ နာရေးကူညီမှုအသင်း - မိမိ၏ မိသားစု၊ ခင်ပွန်းနှင့်အတူ လူမှုရေးလုပ်ငန်းများတွင် မြှုပ်နှံလုပ်ကိုင်သူ။ နာဂစ်မုန်တိုင်းကယ်ဆယ်ရေးကိစ္စများတွင် ငွေကြေး၊ လုပ်အား၊ စွမ်းအင်များကို ထိရောက် မြန်ဆန်မှု ရှိအောင် စီမံခန့်ခွဲနိုင်သူ။ စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်သော ခေါင်းဆောင်မှုပေးနိုင်သည့် အမျိုးသမီးတဦး
၇။ သန်းမြင့်အောင် (စာရေးဆရာမ)၊ နာရေးကူညီမှုအသင်း - စာရေးသားခြင်းအလုပ်ကို အချိန်ပြည့် မလုပ်ကိုင်နိုင်တော့ဘဲ နာရေးကူညီမှုလုပ်ငန်းနှင့်တကွ အခြား အားနည်းသူ ကလေးသူငယ်များ (HIV သင့်ကလေးသူငယ်များ) စောင့်ရှောက်ရေး၊ ရန်ပုံငွေ ရှာဖွေရေး၊ စာပေလောက၊ အနုပညာလောက အသိုင်းအ၀ိုင်းများ၏ ၀ိုင်းဝန်းပါဝင်ဆောင်ရွက်လာရေး စသည့်လုပ်ငန်းများကို စုစည်းဆောင်ရွက်နိုင်သူ။ ၎င်း၏ စာပေရေးသားမှုများတွင်လည်း မြန်မာပြည်၏ အထူးလိုအပ်မှုများ ကြီးမားကျယ်ပြန့်လှသည့် လူမှုရေးဒုက္ခဘေးကို စာဖတ်သူများ စာနာစိတ်၊ သဒ္ဓါစိတ်၊ စေတနာ့ဝန်ထမ်းစိတ်များ ပေါ်ပေါက်လာစေဖို့ အားထုတ်ရေးသားနိုင်သည့် စာရေးဆရာ
၈။ ဖြူဖြူသင်း၊ အင်န်အယ်ဒီပါတီဝင်၊ HIV လူနာများ ကူညီစောင့်ရှောက်ခြင်း - ၂၀၀၂ တွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ လူငယ်အဖွဲ့သို့ လမ်းညွှန်မှုများနှင့်အတူ ကုလအစီအစဉ်ဖြင့် အေအိုင်ဒီအက်စ်- အိတ်ခ်ျအိုင်ဗီ ပညာရေးသင်တန်းကို တက်ရောက်ခဲ့သည်။ ၎င်းနောက် HIV လူနာများ၊ ကလေးသူငယ်များကို ကူညီစောင့်ရှောက်ခြင်းကို ဇောက်ချပြီး လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။ နိုင်ငံရေး အနှောက်အယှက်များကြားမှ ယနေ့ထက်ထိ အဆိုပါလုပ်ငန်းကို တစိုက်မတ်မတ် လုပ်ကိုင်သူဖြစ်သည်။ အခြားအင်န်ဂျီအိုလုပ်ငန်းအများအပြားရှိသည့်ကြားက ဖြူဖြူသင်းနှင့် မိတ်ဆွေများသည် လူနာများ၏ လိုအပ်ချက်များကို အခက်အခဲများကြားထဲက ရဲရင့်စွာ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်း၊ လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုး စွန့်စားဆောင်ရွက်နေရသူ
၉။ ဇာဂနာ၊ လူရွှင်တော်၊ ဒါရိုက်တာ၊ စေတနာ့ဝန်ထမ်း စွမ်းဆောင်သူ - ၂၀၀၈ မေ - နာဂစ်မုန်တိုင်း ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းများကို ဆရာတော်၊ သံဃာတော်များ၊ အနုပညာရှင်များ၊ ပြည်သူများ၊ လူငယ်များနှင့် ပူးပေါင်းပြီး ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့သည်။ ပရိသတ်ကိုလည်း မီဒီယာများကတဆင့် အမြန်ဆုံး သတင်းပို့ ရှင်းပြနိုင်ခဲ့သည်။ စစ်အစိုးရကို နာဂစ်ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပတ်သက်ပြီး ဝေဖန်ပြောဆိုသဖြင့် ဖမ်းဆီးထောင်ချခံရသည်။ ထောင်ဒဏ် ၅၈ နှစ် ကျခံနေရသည်။ လူမှုရေးလုပ်ငန်းများအတွက် အလှူရှင်များ၊ လုပ်အားပေးစေတနာရှင်များနှင့် ပရိသတ်အားလုံးကို စည်းရုံးနိုင်သူ၊ အလုပ်ပြီးမြောက်အောင် ဆောင်ရွက်သူ၊ ရဲရင့်ပွင့်လင်းစွာ ပြောဆိုတင်ဆက်နိုင်သူ အနုပညာရှင်တဦးအဖြစ် ထူးခြားသည်။
၁၀။ ဦးအေးမြင့်၊ (ဦးအေးမြင့်မောင်) လမ်းပြကြယ်ဥပဒေအကျိုးဆောင်အဖွဲ့ - ၂၀၀၃ ခုနှစ်ကတည်းက အဓမ္မလုပ်အားပေးခိုင်းစေခြင်းခံရသူ လယ်သမားများ၊ အလုပ်သမားများနှင့် ရွာသားများအတွက် စစ်အာဏာပိုင်များနှင့် ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းခြင်း၊ ဥပဒေကြောင်းအရ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုများ ပေးခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်သူ ရှေ့နေတဦး။ နိုင်ငံတကာအလုပ်သမားအဖွဲ့ချုပ် ( အိုင်အယ်လ်အို) ထံ စာရင်းများ၊ အချက်အလက်များ ပြုစုတိုင်ကြားခဲ့သဖြင့် စစ်အစိုးရက ထောင်အကြိမ်ကြိမ်ချမှတ်ပြီး အရေးယူခြင်း ခံရသူ ဖြစ်သည်။ ၎င်းအပြင် အသက်မပြည့်ဘဲ စစ်မှုထမ်းရန် အဓမ္မခေါ်ဆောင်ခြင်း ခံရသူ ကလေးစစ်သားများကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်းကိုလည်း ဆောင်ရွက်နေသူ ဖြစ်သည်။ ၎င်း၏ ရှေ့နေလိုက်ခွင့်လိုင်စင်ကို စစ်အစိုးရက ရုတ်သိမ်းခဲ့ပြီး ဖြစ်သည်။
၁၁။ မြန်မာဘလော့ဂ်ဂါဆိုဇိုင်ယတီ၊ MBS (Myanmar Blogger Society) - အင်တာနက်နှင့် ကွန်ပျူတာအခြေစိုက် ပညာဒါနလုပ်ငန်း၊ စေတနာ့ဝန်ထမ်းလူမှုရေးလုပ်ငန်းနှင့် တကိုယ်ရည်တိုးတက်မှုများကို စေတနာ့ဝန်ထမ်းဆောင်ရွက်သော အဖွဲ့တခု ဖြစ်သည်။ ၂၀၀၇ တွင် ပထမဦးဆုံး မြန်မာဘလော့ဂ်ဂါများ ဆွေးနွေး ကျင်းပခဲ့သည်။ ၂၀၀၈ မေ နာဂစ်မုန်တိုင်း ကယ်ဆယ်ရေး၊ ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းများအတွက် အလှူခံခြင်း၊ လုပ်အားပေးခြင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ၂၀၀၈ မှ ၂၀၁၀ အတွင်း ရန်ကုန် မြန်မာအိုင်စီတီပတ်ခ်က အခြေတည်ပြီးနောက် ရန်ကုန်၊ မန္တလေး၊ တောင်ကြီး၊ ပခုက္ကူမြို့များတွင် အခမဲ့နည်းပညာသင်တန်းများ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ အွန်လိုင်းမှတဆင့် အီးဘွတ်များ၊ အခမဲ့ဝန်ဆောင်မှုများလည်း ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် အစုအဖွဲ့တခု ဖြစ်သည်။
၁၂။ လူမှုထူးချွန်ဆုရ ဦးအောင်မြင့်စိုး - တသီးပုဂ္ဂလတဦးအဖြစ် သွေး နှင့်မျက်ကြည်လွှာလှူခြင်း၊ HIV,AIDS ဝေဒါနာရှင်များအား စောင့်ရှောက်ကူညီခြင်း၊ UNICEF နှင့်ပူးပေါင်းပြီး ကလေးသူငယ်များအား ကူညီပံပိုးခြင်း စသည့် လုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်သူ တဦးဖြစ်သည်။ လက်ရှိအစိုးရထံမှ လူမှုထူးချွန်ဂုဏ်ထူးဆောင်အဆင့် ၁ ၊ ၂ ၊ ၃ အဆင့်များ ပေးအပ်ချီးမြင့်ခြင်းခံရသည်။
၁၃။ ဗြဟ္မာစိုရ်အသင်း၊ မန္တလေးမြို့၊ နာရေးနှင့် လူမှုရေးကူညီမှုအသင်း - လက်ရှိ ရန်ကုန်တွင် ထင်ရှားသော နာရေးကူညီမှုအသင်း၏ ရှေ့ဦးကတည်းက တည်ရှိနှင့်ပြီးဖြစ်သည့် မန္တလေးမြို့တွင် မြို့မိ မြို့ဖများ၊ လူငယ်လုပ်အားပေးများနှင့် ဖွဲ့စည်း ထူထောင်ထားသော နာရေးကူညီမှုအသင်းဖြစ်သည်။ အချက်အလက်များ ပိုမိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်စွက်ပြီး ဆက်လက် တင်ပြပါမည်။
၁၄။ ဂရုဏာလူမှုကူညီရေးအသင်း၊ မူဆယ်မြို့၊ ရှမ်းပြည်နယ် - ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ နာရေးနှင့် လူနာစောင့်ရှောက်မှု စေတနာဝန်ထမ်းလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်နေသော အသင်း ဖြစ်သည်ဟု ဆိုပါသည်။ အချက်အလက်များ ပိုမိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်စွက်ပြီး ဆက်လက် တင်ပြပါမည်။
၁၅။ ဒေါက်တာစောဝါးထူး၊ မော်လမြိုင်မြို့ အနာကြီးရောဂါပြုစုစောင့်ရှောက်ရေးဆေးရုံ - အနာကြီးရောဂါသည်များအား ပြုစုစောင့်ရှောက်ဆေးကုသမှုပေးသည့် ဆေးရုံအုပ် ဆရာဝန်ကြီးကို ဆန္ဒပြုတင်ပြထားပါသည်။ အချက်အလက်များ ပိုမိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်စွက်ပြီး ဆက်လက်တင်ပြပါမည်။
၁၆။ မွတ်ဆလင်ကုသိုလ်ဖြစ်ဆေးရုံ၊ ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန် - အထွေထွေရောဂါနှင့် မျက်စိကု ကုသိုလ်ဖြစ်ဆေးရုံကိုလည်း ဆန္ဒပြုထားကြပါသည်။ အချက်အလက်များ ပိုမိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်စွက်ပြီး ဆက်လက် တင်ပြပါမည်။
၁၇။ ဦးမြင့်အေး၊ လူ့အခွင့်အရေးကာကွယ်မြှင့်တင်သူများအဖွဲ့၊ ကြည့်မြင်တိုင်၊ ရန်ကုန် - အဓမ္မလုပ်အားပေးများအား ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး၊ ကလေးစစ်သားများကို ကယ်တင်စောင့်ရှောက်ခြင်း၊ လူ့အခွင့်အရေးကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်းများကို နယ်များ၊ ကျေးလက်များအထိ ဆင်းပြီး ဆောင်ရွက်သူ။ ကော့မှူးမြို့နယ် အဓမ္မလုပ်အားပေးများဘက်က ရပ်တည် တရားစွဲဆိုအောင်နိုင်သူ စုစုနွေးအရေးတွင် အိုင်အယ်အိုထံ သတင်းပေးပို့ပြီး ၀ိုင်းဝန်း လက်တွဲ ဆောင်ရွက်ခဲ့သူ တဦးဖြစ်သည်။
၄။ အထက်ပါ အမည်စာရင်းအပြင် ဧပြီလ ၉ ရက်နေ့အထိ ဆက်လက်ရရှိနေမည့် အမည်စာရင်းများကို အားလုံးထံသို့ အထက်ပါအတိုင်း အကျဉ်းချုပ်ပြန်လည် တင်ဆက်နေမည် ဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့၏ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များ အကျယ်ဖော်ပြချက်တို့ကိုမူ “ဂုဏ်ယူဖွယ်ရာမြန်မာများ ကဏ္ဍ” တွင် အသေးစိတ်ဖတ်ရှုနိုင်အောင် တက်ဆက်ပေးမည် ဖြစ်သည်။ ဧပြီလ ၁၀ နှင့် ၁၁ ရက်တွင် မြို့နယ်များအလိုက် ဖြစ်မြောက်ရေးကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အသီးသီးက ၎င်းတို့၏ ဆန္ဒအရှိဆုံး ၅ ဦးကို ရွေးချယ်ကြမည် ဖြစ်သည်။ ဧပြီလ ၁၂ ရက်မှ ၂၁ ရက်အထိ နောက်ဆုံး ဆန်ကာတင် ၅ ဦးကို ပရိသတ်အားလုံးထံက အင်တာနက်မဲပေးသည့် စနစ်ဖြင့် ပြည်သူ့ဂုဏ်ရည် အဖြစ် ဂုဏ်ပြုနိုင်ရန် ရွေးချယ်မည် ဖြစ်သည်။ ဧပြီလ ၂၄ တွင် ၂၀၀၉ ခုနှစ်အတွက် ပြည်သူ့ဂုဏ်ရည် ချီးမြှင့်သည့် အခမ်းအနားကို အိမ်ရှင်အဖြစ် အယ်လ်အေမိသားစုများက ကျင်းပကြမည် ဖြစ်သည်။ ထိုအခမ်းအနားတွင် မဲအများဆုံး ဆန္ဒပြုခံရသူကို ကြေငြာမည် ဖြစ်သည်။
ပြည်သူ့ဂုဏ်ရည် အစီအစဉ် - ဂုဏ်ပြုရန် အနိမ့်ဆုံး ဆုချီးမြှင့်နိုင်မည့် ပမာဏ - ဒေါ်လာ ငါးထောင်
စာအမှတ် ၂/ ၂၀၁၀ - နေ့စွဲ ဧပြီ ၂၊ ၂၀၁၀
ယခုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြမည့် မြို့နယ်များနှင့် ဖြစ်မြောက်ရေးကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့များ၏ အခြေခံသဘောတူညီချက်အဖြစ် တမြို့လျင် အနည်းဆုံး ဒေါ်လာငွေ ၅၀၀ စီ ထည့်ဝင်ကြရန်နှင့် စုစုပေါင်း အနိမ့်ဆုံး ဆုပမာဏကို အမေရိကန်ဒေါ်လာ ငါးထောင် အဖြစ် အကြမ်းအားဖြင့် သတ်မှတ်ထားပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
လက်ရှိ ပူးပေါင်းကြမည့် မြို့ ၉ မြို့ထံက ဖြစ်မြောက်ရေးကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့များအတွက် ရန်ပုံငွေအလှူခံဖြတ်ပိုင်း စာအုပ်များကိုလည်း ပုံနှိပ်ဖြန့်ချိလိုက်ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ စာရင်းစစ်များရဲ့ တောင်းဆိုချက်အရ အမည်ဖော်မပြလိုသူ အလှူရှင်များကိုပါ အလှူခံဖြတ်ပိုင်းလက်ခံကို ပေးအပ်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သို့ဖြစ်ပါ၍ အလှူရှင်များကလည်း အမှတ်စဉ်နံပါတ်များ ပုံနှိပ်ထားတဲ့ အလှူခံဖြတ်ပိုင်းမူရင်းကို တောင်းဆိုသိမ်းဆည်းကြပါရန် မေတ္တာရပ်ခံ အပ်ပါတယ်။ ၀င်ငွေခွန်တွင် အလှူငွေအဖြစ် ပြန်လည် တင်ပြလိုသူများအတွက် 501 C (3) Tax ID No. ကိုလည်း တောင်းယူမှတ်တမ်းထားနိုင်ပါတယ်။ အွန်လိုင်းက လှူဒါန်းပါဝင်လိုသူများအတွက်လည်း ယခု ဂူးဂဲရဲ့ အလှူခံစနစ်ဖြင့် အလှူငွေကို လက်ခံနေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
ရန်ပုံငွေ ရှာဖွေရေးအတွက် အထောက်အကူပြု ပို့စကဒ်များကို ဖြန့်ချိမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ပထမပို့စကဒ်အဖြစ် ပန်းချီကိုမျိုးရဲ့ ဒီဇိုင်းနဲ့ ပို့စကဒ်ကို ပုံနှိပ်ပြီး မြို့နယ်များအလိုက် ဖြစ်မြောက်ရေးကိုယ်စားလှယ်များထံ ပေးပို့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာရိုးရာ သင်္ကြန်ပွဲများမှာ၊ မိတ်ဆုံပွဲများမှာ အဆိုပါ ပို့စကဒ်များ ဖြန့်ဝေခြင်း၊ ရန်ပုံငွေရရှိအောင် တိုက်တွန်းနိုးဆော်ခြင်းများ ဆောင်ရွက်မှာ ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ်။
http://ifile.it/0u9qon2The Voice 6-22. E-Book Final